Caafimaadka qabriga maryo, Hidden jiinyeer, hubi Fabric - Caafimaadka
Waxaan bixinaa COMPETITVE daahyada, barkimooyin, dhar ...
Shirkadda Our waxaa la aasaasay sanadkii 2006, waxa uu ku yaalaa Port Chinese City --Ningbo. From ay aasaaska ayaa ka go'an in horumarinta iyo iibinta dharka guriga. Waxa aanu leenahay line-soo-saarka iyo shaqaalaha samaynaysaa cut iyo pack ...
Noocyada kala duwan ee Jacquards had iyo jeer waxay u fiican yihiin qurxinta guriga, gaar ahaan daahyada daaqadaha iyo barkimooyinka. Fty -gaagu wuxuu leeyahay in ka badan 500 naqshado kala duwan oo jacquard xulashadaada ah. Oo waxaan leenahay in ka badan 10 sano oo waayo -aragnimo ah oo loogu talagalay qurxinta diyaarka ah. Jacquard textured, blackou madow ...
Muraayadaha daahyada madoow
Suuqa guddiyada daahyada ayaa aad u buuxa, si kastaba ha ahaatee daahyada madmadowga ayaa had iyo jeer u fiican qurxinta guriga. Naqshad fudud, culeys ka culus, gacmo -gacmeed wanaagsan, natiijo sudhan oo wanaagsan, dhammaystirka mugdiga, Waxay u dhigantaa inta badan baahida macmiilka. Eeg sawirka, waa dheeman jacquard de ...
Mawduuc: Barkin daabac leh oo daabac leh oo daabacan
Naqshadaha la daabacay ayaa wali caan ku ah qurxinta guriga. Waxaan haynaa naqshado xarrago leh, naqshadaha xayawaanka, naqshadaha dhirta, naqshadaha badda, iyo sidoo kale inbadan oo ka mid ah macaamiisha ay codsadeen naqshadaha daabacan. Cabirka caadiga ahi waa 18 “x18” ama 20’x20 ”oo ay ku jiraan alaab jilicsan oo PP ah. Dharkeenna salka waxaa lagu sameeyaa microfiber, ...
Mawduuc: Guddi daaha madow
Daaha madow ee dharka leh 210gsm Holland maro jilicsan, joomatari joomateri koronto ah, naqshad caadi ah, muuqaal raaxo leh, dhiibis jilicsan iyo si toos ah u laalaada. Xajmiyada 37 "x84" 2 pk iyo 52 "x84" hal, grommets, midabyo badan, oo kufiican qolka fadhiga iyo qolka jiifka. Wixii xiisaha xiisaha leh daahyada ...
Panel , Brygge daabac barkin , Daabacaadda sheer , Chaise Lounge Set barkin , Print barkin , Car Kursiga barkin ,